28 February 2018 Volume :6 Issue :5
Lo msebenzi wezigidigidi – okungowokuqala e-Afrika- uhlanganise amazwe amane: i-Kenya, i-Tanzania, i-Swaziland neNingizimu Afrika.
Lo msebenzi ugxile kulezi zigaba: (1) ukufundisa ngomdlavuza wamaphaphu eKwaZulu-Natal, (2) ukuhlola izidingo okuzohlonza okuvimba ukuthola kweziguli usizo, (3) ukudluliswa, ukuhlonzwa nokwelashwa kanye nokuhlolwa kobungcuphe obuhambelana nomdlavuza wamaphaphu e- KwaZulu-Natal, kanye (4) nokuhlolwa kwalokho okukhomba ukusetshenziswa kokunakekelwa okunciphisa izinhlungu ngaphandle kokwelapha isifo ezigulini ezinomdlavuza ezibhedlela zomphakathi kanye nezangasese.
Njengoba luxhaswe yi-Bristol-Myers Squibb Foundation (BMSF), abaphenyi abakhulu balolu hlelo uDkt Themba Ginindza onguthisha e-UKZN futhi ofundele ukuhlola ukusabalala nokulawulwa kwezifo, noMqondisi Wezokwelapha we-AMPATH Oncology and Haematology Programme e-Moi University e-Kenya, uSolwazi Chite Asirwe.
UGinindza uthe lo msebenzi wokubambisana uhlanganise nemiphakathi yasekhaya neminyango yezempilo yohulumeni e-Kenya, e-Swaziland, naseNingizimu Afrika. ‘Leli thimba lizokwenza ucwaningo oluphambili olugxile ekususeni okuvimbayo nokuqala ukusebenzisa izindlela zokulekelela ezidingeka kakhulu kulezi zifunda,’ uthembise lokhu.
Umongameli we-Bristol-Myers Squibb Foundation uDkt John Damonti uthe: ‘I-BMSF iyaziqhenya ngokweseka ukwethulwa kwe-MLCCP. Ukufezwa kwezidingo zokwelashwa zeziguli ezinomdlavuza ezifundeni ezingenayo intuthuko kuyinto ehamba phambili kokuhloswe yi-Foundation.’
Uhlangothi lwase-KZN-Ningizimu Afrika lomsebenzi luholwa yiqembu lezifundiswa ezinhlanu zase-UKZN, kubalwa noGinindza.
‘Inhloso yomsebenzi ukulekelela ekuhlelweni kwezinsizakwelapha zesifo somdlavuza ngendlela ebhekelele izidingo zomphakathi. Ngalolu hlelo sizothola ukuqonda okungcono mayelana nesimo sezinsizo zokwelashwa kwesifo somdlavuza esifundazweni,’ kusho u- Damonti.
U-Asirwe uthe: ‘Amazwe amaningi ase-Afrika awanakho ukuqonda okufanele ngokusabalala nokulawulwa kwaso okwenza ukwakha amasu okulwisana naso kube nzima. Umphumela walokhu ukuthi abanalesi sifo bafika emitholampilo emva kwesikhathi, okwenza ukwelashwa nokunakekelwa kube nzima futhi kungabinawo umthelela odingekayo futhi lokhu kuholela ekufeni,’ usho kanje.
Umsebenzi uzokwelekela imiphakathi emihlanu e-KZN - Umlazi, e-Chatsworth, e-South Durban Basin, Imbali naseSobantu – yonke isezindweni ezizungeze izibhedlela ezinosizo lokwelapha umdlavuza.
Iqembu lezocwaningo lase-UKZN selakhe ubudlelwano noMnyango WezeMpilo kanye nabanye ababamba iqhaza emiphakathini ukuze kuqinisekiswe impumelelo yalolu hlelo.
Umcimbi wokwethulwa bewuhanjelwe uMqondisi waseNingizimu Afrika we-Bristol Myers Squibb Foundation, uNkz Phangisile Mtshali-Manciya; iSekelashansela lase-UKZN, uDkt Albert van Jaarsveld; uSolwazi Ben Sartorius WezokweLashwa Komphakathi (Ongumseshi Omkhulu) e-UKZN; uMqondisi: Epidemiology, Research and Knowledge Management eMnyangweni WezeMpilo e-KZN, Dkt Elizabeth Lutge; abaphathi bezibhedlela zasekhaya; uDkt Khumbulani Hlongwane, uMnu Nkosinathi Jafta kanye noMnu Siyabonga Dlamini.